အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ	← Older posts
# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများPublished April 19, 2013 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မဟာဘုတ်, ဟူးရားဗေဒင်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged ဒီနှစ် ဗေဒင်, မဟာဘုတ် ဗေဒင်, ဗေဒင် 2013, ဗေဒင် ၁၃၇၅ ခုနှစ်, မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅) ခုနှစ် (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၇ ရက် သားသမီး, နှစ်ဆန်း ဗေဒင်, နှစ်သစ်ကူး ဗေဒင် | 30 Comments	# ကမ္ဘောဇဘဏ် (လုံးဝ) မပျက်နိုင်ပါPublished October 6, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
အောက်ပါ ဆောင်းပါးသည် 2012 အောက်တိုဘာလ လဆန်းပိုင်းတွင် “ကမ္ဘောဇဘဏ်” နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသော ကောလာဟလ တစ်ခုအပေါ်တွင် ဟောကိန်းထုတ်ထားသော ဆောင်းပါးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယခု အချိန်တွင်မူ မိမိဟောကိန်းအတိုင်း ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ပုံမှန် လည်ပတ်လျှက်ရှိပြီး ဘဏ်ခွဲများတစ်ခုပြီး တစ်ခု ဖွင့်လှစ်လျှက် ရှေ့သို့ ဆက်လျှက်ချီတက်လျှက် ရှိပါသည်။ (အချို့သော သူများသည် Search Engine တွင် ယခုမှ ရှာတွေ့ပြီး ဖတ်လိုက်မိလိုက်ချိန်တွင် ရက်စွဲကို သတိမထားမိဘဲ ယခုလတ်တလော ဖြစ်နေသော ကိစ္စရပ်ဟု အမှတ်မှားတတ်ခြင်းကြောင့် ကြိုတင်အသိပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်)
(ကြာသပတေးနေ့) ညပိုင်းက “ဖေ့စ်ဘုတ်” ပေါ်မှာ ကမ္ဘောဇဘဏ် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကောလာဟလလေး တစ်ခု တွေ့လိုက်ပါတယ်။ ဘာမှန်းတော့ ရေရေရာရာ မသိပါ။ “ဖေ့စ်ဘုတ်” ပေါ်က သတင်းတွေကလည်း ယုံကြည်စိတ်ချရမှုက နည်းလေတော့ ဒီလိုဘဲ နေလိုက်ပါတယ်။ သိပ် စိတ်ဝင်စားမှု မရှိလှပါ။
ဒါပေမယ့် မနေ့က (သောကြာနေ့) မှာတော့ သတင်းက လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ် ပိုဖြစ်လာပါတယ်။ ဘဏ်ဥက္ကဌ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ၊ ဘဏ် ဒေ၀ါလီ ခံရတော့မယ် . . . စသည်ဖြင့် ကြားလာရပါတယ်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲတွေမှာလည်း ငွေထုတ်သူတွေ ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကို ကြားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မှာလည်း “သောကြာနေ့” ဆိုတာ အမြဲဘဲ Busy Day ဖြစ်လေတော့ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်မို့ ဒီသတင်းကိုလည်း သိပ်အာရုံ မပြုနိုင်ပါ။ သိပ်လည်း မယုံလို့ပါ။
ဒါနဲ့ ညဖက် (၇)နာရီ RFA သတင်းမှာတော့ ဒီသတင်း ထပ်ပါလာပြန်ပါတယ်။ မနက်က ကြားရသလိုပါဘဲ။ ဘဏ်ဥက္ကဌ ဘာညာဖြစ်တယ်၊ ဘဏ် ဒေ၀ါလီ ခံရတော့မယ် စတဲ့ သတင်းတွေ ကောလဟာလဖြစ်နေကြောင်းပါ။ ဘဏ်တွေမှာလည်း အပ်ထားတဲ့ငွေတွေ ပြန်ထုတ်သူတွေ များနေတယ် . . စသည်ဖြင့်ပေါ့။
ဒီတော့ (၈)နာရီ သတင်းပြီးတာနဲ့ ချက်ခြင်းဘဲ ဒီကိစ္စဟာ ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်ကို ချက်ခြင်း “ဟူးရားမဟာကာလကြီး” ဇာတာချပြီး တွက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဇာတာခွင်ချလိုက်ပြီး ဇာတာကို “လဂ်” တပ်လိုက်တာနဲ့ ချက်ခြင်း အဖြေက ထွက်နေပါပြီ။ သိပ် ခက်ခက်ခဲခဲကြည့်ရတဲ့ အနေအထားမျိုး မဟုတ်ပါ။ အဖြေ ရှင်းလင်းစွာ ထွက်တဲ့ ဇာတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
“ကမ္ဘောဇဘဏ် လုံးဝ မပျက်နိုင်ပါ” ။ အောင်မြင်စွာ ဆက်လက်ရပ်တည်သွားပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ သတင်းတွေဟာ ကောလာဟလ များသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘဏ်မှာ ငွေအပ်ထားသူများ စိတ်အေးလက်အေး နေနိုင်ပါတယ်။ ဘာမှ စိတ်ပူစရာ မရှိပါ။
Posted in ဟူးရားဗေဒင်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged မဟာကာလ ဟူးရားဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင်Published December 16, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in ဟူးရားဗေဒင်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, အမှာ သတင်းစကား, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Mahakarlagyi, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2011, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# ဟူးရား မဟာကာလကြီး ဆိုတာPublished September 16, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	မြန်မာ့ရိုးရာ မဟာကာလကြီး ဗေဒင်ကို - မြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ (ကေပီစနစ်) လိုဘဲ တွက်ချက်လို့ ရနိုင်တဲ့ နည်းစနစ်ကို ကျွန်တော် တီထွင်ထားတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ စာအုပ်တစ်အုပ်လည်း ရေးနေတာ မပြီးသေးပါဘူး။ (ဆက်ပြီး မရေးဖြစ်တာပါ)။ ဒီပညာအကြောင်းကို ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်မှာ မကြာခဏ ပြောထားတာရှိတော့ နည်းပညာ အသစ် အဆန်းလိုလားသူတွေလည်း မချင့်မရဲ ဖြစ်နေကြတာကို ကျွန်တော် သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့တော့ ဟူးရားမဟာကာလကြီးပညာနဲ့ တွက်ချက်မှုလေးတစ်ခုကို တင်ပြပေးပါမယ်။ လက်ရိုးအခြေခံ ရှိသူ (သို့) မဟာကာလကြီး အခြေခံရှိသူများတော့ နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျန်သူတွေ အတွက်တော့ အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ဆောင်းပါးလေးဟာ ပညာရှင်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လို့ဘဲ ဆိုရပါတော့မယ်။
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# တိုင် အတိတ် / တိုင် နိမိတ်Published August 18, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# ကောလာဟလPublished August 15, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, ယုံတမ်းစကား, သတင်းပေးသူ, ကောလာဟလ, ၀ါဒဖြန့်ခြင်း	# မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၂ ခုနှစ် /နှစ်သစ် ဟောကိန်းများPublished April 26, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, နှစ်ကူး ဗေဒင်, နှစ်ဆန်း ဗေဒင်	# သူ့ကို နိုင်လို ဆ, ကိုခို လိုရာဆေးဖေါ်သုံးPublished March 4, 2010 | By dr.tin bo bo	အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာဗေဒင်ပညာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကုန်းဘောင်ခေတ်ဦးလောက်မှာ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပုံ ရပါတယ်။ စတင် တီထွင်သူလို့ အသိအမှတ်ပြု ခံရသူကတော့ တောင်တွင်းကြီးမြို့နေ အတုလ “ခင်ကြီးဖျော်” လို့ အမည်နာမတွင်တဲ့ ဆရာတော် တစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော် အတုလ ခင်ကြီးဖျော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး “၀ီကီမြန်မာ ဆိုဒ်” ထဲမှာ ဒီလို ရေးသားထား တာကို တွေ့ရပါတယ်။
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 17 Comments	# 2012 မှာ တကယ်ကမ္ဘာပျက်မှာလား ?Published November 13, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
အခုတစ်လော ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့မှာ ကမ္ဘာပျက်လိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ ကောလဟာလက တစ်နေ့တစ်နေ့ မကြားချင် အဆုံးဖြစ်နေသဗျ။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် က မိတ်ဆွေတွေ၊ အသိအကျွမ်းတွေကလည်း လူချင်း တွေ့ရင် တစ်မျိုး၊ ဖုန်းနဲ့လှမ်းမေးတာက တစ်ဖုံနဲ့ ဒီကိစ္စကို တစ်ကယ် ဟုတ်မဟုတ် ခဏခဏ မေးလိုက် ကြတာများ မပြောပါနဲ့ တော့။ မေးတဲ့သူတွေ ဆိုတာကလည်း “ဗေဒင်ပညာ” နဲ့ “နက္ခတ္တပညာ” (၂)ခုကို ကွဲကွဲပြားပြား မသိကြ တော့ ဗေဒင်ဆရာ ဆိုရင် ဒီလိုကိစ္စမျိုးကို ကောင်းကောင်းသိမှာဘဲလို့ ထင်နေ ကြပုံ ပေါ်ပါ တယ်။ ဘာဆိုင်လဲဗျာ။
အင်းလေ- ထင်မယ်ဆိုရင်လဲ ထင်စရာပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာကလည်း Astronomy ခေါ်တဲ့ နက္ခတ္တပညာကို စနစ်တကျ သင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ ကျောင်းမျိုးကလည်း မရှိ၊ ပညာရှင်ရယ်လို့ကလည်း မရှိတော့ ဗေဒင်ဆရာတွေကဘဲ “ဘာအဖွဲ့အစည်း၊ ညာအဖွဲ့အစည်း” တွေ ထောင်ပြီးတော့ “ဘယ်နေ့မှာတော့ နေ, ကြတ် လိမ့်မယ်၊ ဘယ်နေ့မှာတော့ လ,ကြတ်လိမ့်မယ်လို့ ဟောကိန်းတွေထုတ်၊ အဲဒါကို ဂျာနယ်တွေက သတင်းကြီးတစ်ခု လုပ်ကြပြန်တော့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေမှာလည်း ယောင်ချာချာနဲ့ ဗေဒင်ဆရာဆိုတာဘာလဲ? နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ဆိုတာဘာလဲ? ဆိုတာကို ကွဲကွဲပြားပြား မသိနိုင်အောင် ဖြစ်နေကြရတာကိုးဗျ။
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, အမှာ သတင်းစကား | Tagged 2012 မှာ တကယ်ကမ္ဘာပျက်မှာလား ?, Myanmar Astrology, အမှာ သတင်းစကား |5Comments	# ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မြန်မာ့ဟူးရားဗေဒင် (၂)Published September 18, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged Myanmar Astrology, ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မြန်မာ့ဟူးရားဗေဒင် (၂), မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 16 Comments	← Older posts
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,817)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,455)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,205)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,051)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,076)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,397)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,217)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,718)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,768)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,412)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,357)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,223)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,165)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,135)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,457)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,419)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,100)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,909)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,767)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,761)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,293)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,898)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,793)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,746)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,615)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,571)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,354)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,209)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,166)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,072)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !
27 Users Online	Link1 | Link2 | Link3Copyright © 2013. Compu BayDaThuKhuMa. Designed by CompuBayDaThuKhuMa.